Sawiro Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdi ka socda Dowlada Masar. – Xeernews24
Sawiro Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdi ka socda Dowlada Masar.
15. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa qaabilay wefdi ka socda dowladda Masar oo soo gaadhsiiyey dhambaal hambalyo ah oo ay uga sideen dhiggiisa dalkaasi.
Wefdiga uu qaabilay madaxweynaha J.F.S Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa hoggaaminayey Ergay gaar ah oo uu soo wakiishay madaxweynaha dalka Masar Cabdul-fataax Al-Siisii, madaxweyne Farmaajo, ayaa guddoomay dhambaalka looga siday madaxweynaha Masar, isla markaana uga mahadceliyey.
Dhambaalka ayaa ahaa hambalyo ku aaddan xilka madaxweynenimo ee loo doortay siddeeddii bishaan, waxa uu sidoo kale ku sheegay in uu ku faraxsanahay iskaashiga iyo xidhiidhka wanaagsan ee u dhaxeeya labada dal.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, wasiir ku xigeenka iyo ku xigeenka Danjiraha Soomaaliya ee dalka Masar ayaa kulanka ku wehliyey madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cabdi-salaam Hadliye Cumar Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, ayaa si kooban u sheegay in kulanka sidoo kale inta uu socdey la isla gartay in la sii wado iskaashiga labada dal, lana kordhiyo wax wada-qabsiga dhinacyada amniga, Ganacsiga iyo midka Diblomaasiyaddeed.
Dhinaca kale Madaxweynaha J.F. S ayaa qaabilay wefdi kale oo ka socdey dalka Jermalka oo iyaguna siday dhambaal hambalyo ku socoto madaxweynaha iyo shacabkiisa, madaxweyn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaana uga mahadceliyey taageerada ay dowladda Jermalka u heyso Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/55.png 363 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-15 09:11:222017-02-15 09:11:22Sawiro Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdi ka socda Dowlada Masar.
Is Barbar-dhig ku samee Caasimadda Tigreega Ethiopia Makele oo ahayd 20 sanno... Safiirkii Israel ee dalka Masar oo arrimo ammaan darteed u tagi la’ Qaahi...